सिटौलाको भण्डारबाट केही चोर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरुले फैलाएको हल्ला हो यो :कृष्णप्रसाद सिटौला spacekhabar
१३ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीको टिम बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको थियो। १४ औं महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ?
गौशालामा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा कोरोना संक्रमणका कारण केही समय भेटघाट बन्द गरेका थियौं। अब हामीले यहि सम्पर्क कार्यालयमा भेटघाट अघि बढाएका छौं। हाम्रो टिमको बैठक बसिरहेको छ। देशव्यापी तयारी अघि बढेको छ।
तपाईको मात्र हो कि सिंगो टिमको पनि तयारी?
१३ औं महाधिवेशनमा हाम्रो टिम सानो थियो। पर्याप्त गृहकार्य पनि हुन सकेको थिएन। एक किसिमले भन्दा तयारी बिनाको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थियौं। तर यो पटक पूर्ण तयारीका साथ अघि बढेका छौं।
तयारीका साथ अघि बढेका छौं त भन्नुभयो। तर १३ औं महाधिबेशनमा तपाईसँगै रहेका गगन थापा, प्रदीप पौडेलहरु अहिले साथमा नभएको सुनिन्छ नि?
सिटौलाको भण्डारबाट केही चोर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चलाइएको यो हल्ला मात्र हो। यस्ता हल्लाले हाम्रो टिममा केही हल्लिने वाला छैन। हामी सामूहिक निर्णयका साथ अघि बढेका छौं। यो पटक बिस्तारित टिमका साथ अघि बढ्छौं।
शेरबहादुर, रामचन्द्रलाई अभिभावक बनाएर युवापुस्ताबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने देशव्यापी कार्यकर्ताको चाहना छ नि?
सहमति गरेर अघि बढ्न सके राम्रो हो। तर सहमति हुदैन भने बुढा, युवा भनेर हुदैन। सबै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर अघि बढ्दा पनि पार्टीलाई राम्रो हुन्छ। म कसैकाप्रति आग्रह पूर्बाग्रह राख्दिन।
यति भनिरहदा महाधिबेशन नै नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ नि?
अब महाधिबेशन भएन भने कांग्रेसको बैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण महाधिबेशन सम्पन्न गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। मैले त काठमाडौंमा रहेका साथीहरुलाई पनि जिल्ला जिल्लामा गएर तयारी गर्नुस् भनेको छु। क्रियाशील सदस्यता छानवीन समितिले हप्ता दिनभित्र सबै काम टुंग्याउँछ। बिशेष कारणबश तल्लो तहको अधिबेशनमा एकदुई दिन यताउता भए पनि केन्द्रीय महाधिबेशन तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ र हुन्छ। अब धेरै आशंका नगरौं।
महाधिबेशन नगरी केही पदाधिकारी थप गरेर अघि बढ्ने बिषयमा सभापतिसँग तपाईको कुरा भयो भन्ने बाहिर चर्चा छ नि?
यसमा कत्ति पनि सत्यता छैन। यसबारे केही चर्चा नै भएको छैन।
१३ औं महाधिबेशनमा दोस्रो चरणमा शेरबहादुरलाई सघाउनु भएको थियो। अहिले के होला त?
१३ औं महाधिबेशनमा जितेको शेरबहादुर देउवाको टिम छरपष्ट भएको छ। विमलेन्द्रजीले सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अर्कातिर रामचन्द्र पौडेलको टिम अलपत्र भएको छ। चार जनाले उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हामी एकढिक्का भएका छौं। जो जता भए पनि हामी कांग्रेसको एउटै घरमा छौं। यसलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका रुपमा लिनुपर्छ। सैद्धान्तिक, नीतिगत दृष्टिकोणबाट भोलिका दिनमा कुन समूह को सँग नजिक हुन्छ। त्यो पछि नै थाहा हुन्छ। हामी पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर आफू र आफ्नो टिमलाई नै बलियो बनाउने छौं।
शेरबहादुर र तपाई बीच मिलेर जाने सहमति भयो भनिन्छ नि?
होइन। महाधिबेशनको तयारीका क्रममा शेरबहादुर मात्र होइन, रामचन्द्र, विमलेन्द्र लगायतका नेताहरुसँग भेटघाट, कुराकानी भइरहेको छ। हाम्रो टिम आफै बलियो हुँदै गएको छ भने मिलेर जाने भन्ने करै छैन। दोस्रो चरणमा प्रबेश गर्यो भने त्यतिबेलाको परिस्थिति हेरेर हामी निर्णय गर्छौं।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २२, २०७८, १०:४५:००